SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Macua Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Navajo Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tshwa Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Mwana wenyu ari kuratidza kuti anozvikudza apa anongova nemakore 10!
Anoda kuti vanhu vese vamuitire zvaanoda.
Munotanga kunetseka mozvibvunza kuti, ‘Chii chiri kuita kuti adaro? Handidi kuti azvitarisire pasi asi haafaniri kuzozviona seanokosha kupfuura vanhu vese!’
Zvinoita here kudzidzisa mwana kuti azvininipise asi asingazozvitarisiri pasi?
Mumakore achangopfuura, vabereki vanga vachikurudzirwa kuti vaitire vana vavo zvavanoda, vachivarumbidza zvakanyanya kunyange pasina chine musoro chavaita. Vainziwo vasavatsiura kana kuvaranga. Zvaifungidzirwa kuti kuita izvi kunobatsira vana kuti vakure vasingazvitarisiri pasi. Asi zviri kushanda here? Bhuku rinonzi Generation Me rinoti: “Pane kuti vana vakure vaine unhu hwakanaka uye vachifara, vari kupedzisira vasisina hanya nevamwe.”
Vana vanenge vakura vachingorumbidzwa pese pese havadi kuudzwa kuti vakanganisa kana kushorwa. Vanotadza kuita ushamwari hunogara nekuti vanenge vakadzidziswa kungofunga zvavanoda ivo. Saka vakawanda vacho vanopedzisira vava kuzvidya mwoyo uye kurwara nedepression.
Vana vanonzwa vaine kakuzviremekedza kana vaita chinhu chine musoro, kwete nekugara vachiudzwa kuti vanokosha. Pamabasa avanenge vasarudza, vanofanira kushanda nesimba kuti vave neunyanzvi. (Zvirevo 22:29) Vanofanira kufungawo vamwe. (1 VaKorinde 10:24) Kuti vaite zvese izvi, vanofanira kuzvininipisa.
Murumbidzei pazvinenge zvakakodzera. Kana mwana wenyu akapasa kuchikoro, murumbidzei. Kana akafoira, musamhanyira kupa maticha mhosva. Izvozvo zvinoita kuti mwana wenyu atadze kuzvininipisa. Mubatsirei kuti ashande nesimba. Paanozoita zvinhu zvine musoro, chibvai mamurumbidza.
Mutsiurei. Hazvirevi hazvo kuti anofanira kungotsiurwa pese paanenge akanganisa. (VaKorose 3:21) Asi kana iri nyaya yakakura anofanira kutsiurwa. Izvi zvinosanganisirawo kana ava kuita humwe unhu husina kunaka. Mukamusiya, anotozokura aine unhu ihwohwo.
Semuenzaniso, ngatitii mwana wenyu ava nekatsika kekuda kushamisira. Akasatsiurwa anopedzisira ava kuzvikudza uye ava kutarisira vamwe pasi. Saka anoda kuudzwa kuti kushamisira kunoita kuti vamwe vasamufarira uye anogona kuzonyara mumwe musi. (Zvirevo 27:2) Muudzeiwo kuti munhu haafaniri hake kudada neunyanzvi hwaanenge ainahwo. Kumutsiura zvine rudo seizvi kuchaita kuti ave munhu anozvininipisa uye anoramba aine kachiremerera.​—Zvinotaurwa neBhaibheri: Mateu 23:12.
Itai kuti mwana azive zvakaita upenyu. Kujaidza mwana kunogona kuita kuti apedzisire ava kufunga kuti anofanira kuitirwa chese chaada. Semuenzaniso, kana achida chinhu chamusingakwanisi kutenga, mudzidzisei kuti zvakakosha kugutsikana nezvinhu zvinenge zviripo. Kana makundikana kuenda kunovhakacha, mutsanangurirei kuti muupenyu, zvimwe zvinhu zvaunenge wakaronga zvinogona kuzokundikana. Musazviomesera nekuita zvimwe zvinhu muchingoitira kuti vana venyu vafare. Ngavakure vachiziva kuti zvinhu zvinombooma.​—Zvinotaurwa neBhaibheri: Zvirevo 29:21.
Mudzidzisei kuva nerupo. Muratidzei kuti “kupa kune mufaro mukuru kupfuura kugamuchira.” (Mabasa 20:35) Mungazviita sei? Garai naye pasi monyora vanhu vanoda kubatsirwa pazvinhu zvakadai sekuvaendera kumashopu, kuvagadzirira zvinhu zvinenge zvafa pamba kana zvimwewo. Pamunonobatsira vanhu ivavo, endai naye. Itai kuti aone kufara uye kugutsikana kwamunoita panomubatsira vamwe. Iyi ndiyo nzira yakanakisisa yekudzidzisa mwana wenyu kuzvininipisa.​—Zvinotaurwa neBhaibheri: Ruka 6:38.
“Munhu wose anozvikwidziridza achaninipiswa, uye munhu wose anozvininipisa achakwidziridzwa.”​—Mateu 23:12.
“Kana munhu achitunhira mushandi wake kubvira achiri muduku, iye achazova munhu asingaongi muupenyu hwake hwapashure.”​—Zvirevo 29:21.
“Garai muchipa.”​—Ruka 6:38.
FUNGA KUTI VAMWE VAKURU
Bhaibheri rinoti: “Musingaiti chinhu nokukakavara kana kuzvikudza, asi nepfungwa dzinozvininipisa muchifunga kuti vamwe vakuru kwamuri, musingarambi muchiva nehanya nezvinhu zvamunoda imi pachenyu, asi muchiva nehanya nezvinhu zvinodiwawo nevamwe.”​—VaFiripi 2:3, 4.
Mwana anokura achidzidziswa izvozvo anoziva kuti munhu wese ane zvimwe zvaanogona kumupfuura. Kuzvininipisa kuchabatsira mwana wenyu kuti asakanganiswa netsika yekuzvifunga yakazara muvanhu.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku MUKAI! Nhamba 6 2017 | Nyika Yakanangepi?